July Dream: One At A Time
ကြယ်ငါး ကောက်သွားပါတယ် ဆရာ ... :)
ကြယ်ငါးကို ကောက်ပြီးသွားရင် ပင်လယ်ထဲ ပစ်ချပေးအုံး။ အိမ်တော့ မယူသွားနဲ့။ တော်ကြာ ကြယ်ငါးလေးက အကို့အမျိုးသမီးကို မြင်မိပြီး အခုချက်ချင်း လူဖြစ်ချင်တယ် လူဖြစ်ချင်တယ် အော်နေမယ်နော်။ အဟ... :P
အခုမှ ဖတ်ဖူးတာပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ့်ကို စွဲကျန်ရစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ ပြောသွားတာလေး “madeadifference to that one!" ဆိုတာလေးကို အကြိုက်ဆုံးပါ ..။ ကျေးဇူး July ရေ...။
madeadifference to that one! ဆိုတဲ့စကားစုကလေးက ရင်ကိုထိတယ်။